Windows တွေနဲ့ Office တွေကို Activate လုပ်ဖို့ Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Activator Computer software Windows တွေနဲ့ Office တွေကို Activate လုပ်ဖို့ Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7
Windows တွေနဲ့ Office တွေကို Activate လုပ်ဖို့ Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7
Maung Pauk at 10:42:00 PM Activator, Computer software,
မိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ နောက်ဆုံးပေါ် Windows 10 ကိုတင်ထားပြီး Activate မဖြစ်ဘူးလား၊ နောက်ဆုံးပေါ် Office ကိုတင်ထားပြီး Activate မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေလား... ဘယ် Windows OS ကိုမဆို Activate လုပ်နိုင်ရုံမက နောက်ဆုံးပေါ် Office ကိုပါ Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7 ကိုအသုံးပြုပြီး Activate လုပ်လိုက်ပါ..
ဒီ Activator လေးဟာ Windows OS ရဲ့ စနစ်တွေကို ပြဿနာမတက်စေဘဲ Windows တွေကို Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. Windows Vista က စပြီး Windows 7, Windows 8, Windows 10 နောက်ဆုံးပေါ်တွေအားလုံးအတွက် စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. Office တွေထဲမှာတော့ Office 2010/2013/2016 Preview တွေထိ Activate လုပ်နိုင်မှာပါ..
1. ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုဖြည်ပြီး Run As Administrator နဲ့ Run ပါ..
2. Clean Activation History ကိုနှိပ်ပါ..
3. Update Server ကိုနှိပ်ပါ..
4. ကိုယ့် Windows ကိုရွေးပြီး Activation Now ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..
5. ကွန်ပျူတာကို Reboot ချပေးလိုက်ပါ..
< Unicode >
မိတျဆှရေဲ့ ကှနျပြူတာမှာ နောကျဆုံးပျေါ Windows 10 ကိုတငျထားပွီး Activate မဖွဈဘူးလား၊ နောကျဆုံးပျေါ Office ကိုတငျထားပွီး Activate မဖွဈလို့ စိတျညဈနလေား... ဘယျ Windows OS ကိုမဆို Activate လုပျနိုငျရုံမက နောကျဆုံးပျေါ Office ကိုပါ Activate လုပျပေးနိုငျတဲ့ Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7 ကိုအသုံးပွုပွီး Activate လုပျလိုကျပါ..
ဒီ Activator လေးဟာ Windows OS ရဲ့ စနဈတှကေို ပွဿနာမတကျစဘေဲ Windows တှကေို Activate လုပျပေးနိုငျပါတယျ.. Windows Vista က စပွီး Windows 7, Windows 8, Windows 10 နောကျဆုံးပျေါတှအေားလုံးအတှကျ စိတျခလြကျခြ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. Office တှထေဲမှာတော့ Office 2010/2013/2016 Preview တှထေိ Activate လုပျနိုငျမှာပါ..
1. ဒေါငျးထားတဲ့ဖိုငျကိုဖွညျပွီး Run As Administrator နဲ့ Run ပါ..
2. Clean Activation History ကိုနှိပျပါ..
3. Update Server ကိုနှိပျပါ..
4. ကိုယျ့ Windows ကိုရှေးပွီး Activation Now ကိုရှေးပေးလိုကျပါ..
5. ကှနျပြူတာကို Reboot ခပြေးလိုကျပါ..
What’s new in v3.7 (November 10 2017)
-Can activate and Windows 10 Redstone 4
-we reduced the setup size
Kms Activator can Activate
Download and Install the Application From The Links Givwn Below
For activation permanent
Click on "Activation Permanent Now"
Download Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.7.zip : 9.65 MB
Activator, Computer software
Activator Computer software
DriverPack Solution (2018) 17.7 ISO
GALAXY S8 SM-G950U Root File,Combination File And ...
Wondershare Data Recovery v6.6.0.21
Windows တွေနဲ့ Office တွေကို Activate လုပ်ဖို့ Win...
Xiaomi Account Lock မကျအောင် User တွေအနေနဲ့ သတိထား...
Vivo Y22 Dead Fix File
Mi A1 ဖုန်းတွေအတွက် root မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် 100% ...